UpSnap: doka amin'ny finday, eo an-toerana ary amin'ny jeografia azo tratrarina
Alatsinainy, Aogositra 3, 2015 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Douglas Karr
UpSnap dia manolotra tamba-jotra dokambarotra finday manome fahatsapana mihoatra ny iray lavitrisa isam-bolana. Ary amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny sasany amin'ireo tranokala lehibe indrindra dia afaka mampiseho doka amin'ny tambajotran'olon-kafa amin'ny fahitana maherin'ny 100 miliara isam-bolana. Ny UpSnap dia ahafahanao mikendry ireo mpanjifa izay eo akaikin'ny orinasanao. Raha vantany vao mandeha mivantana ny fampielezan-kevitrao, UpSnap dia hampiseho ny doka findainao amin'ny mpanjifa ao anatin'ny radius dimy kilometatra. Miparitaka ivelany ny tanjona